FAQ - GoViral
Manana fanontaniana momba ny GoViral ve ianao? Jereo ny lisitra eto ambany raha te hanontany matetika izahay. Raha tsy voatanisa eto ny fanontanianao dia mifandraisa aminay azafady.
Ahoana no hanombohako azy?
Simply hisoratra anarana, dia Hiditra ary mitsidika ny “Mahazo vola”Fizarana hanombohana mijery horonantsary. Ny horonan-tsary rehetra jerenao, toy ny, maneho hevitra ary misoratra anarana dia hahazo vola madinika.
Raha vantany vao manam-bola handany ianao dia ampidiro ao amin'ny “Ny horonan-tsary”Fizarana ary safidio ny habetsaky ny mpanjifa, ny fomba fijery, ny tiana ary ny hevitra tianao ho azo isaky ny horonan-tsary.
Alefaso ny kaomandinao ary mipetraha raha mbola manatitra ny zava-drehetra ny tamba-jotra!
Manohiza mahazo vola madinika maimaimpoana hahafahanao manafatra serivisy bebe kokoa amin'ny horonan-tsarinao, na mitsidika ny “Mividiana vola”Hividy azy ireo.
Eny, manao izany tokoa isika! fotsiny Hiditra ary mitsidika ny “Manasa & mahazo bebe kokoa”Hahitanao ny URL tokana nomenao.
Ny olona rehetra jerenao amin'ny tambajotranay izay manoratra kaonty sy mahazo vola madinika dia hahazo komisiona 10% ho anao.
Midika izany fa raha manondro olona 10 ianao izay samy mahazo farantsakely 1,000 (vola 10,000 farataly) dia ho valina ho azy ianao 10% amin'izany, izany hoe farantsakely 1,000.
Ny fanondroana ireo mpampiasa amin'ny GoViral no fomba mora indrindra sy tsy misy ezaka indrindra ho anao mba hahazoanao vola madinika avy hatrany amin'ny ezaka ataon'ny mpampiasa anao.
Ny paikady tsara indrindra hanondroana ireo mpampiasa miaraka amin'ny URL tsy manam-paharoa dia ahitana:
1. Mametraha horonantsary YouTube momba ny GoViral.
2. Alefaso mailaka / hafatrao ireo namanao sy mpiara-miasa aminao izay manana fantsona YouTube ihany koa.
3. Manorata lahatsoratra amin'ny bilaogy momba ny GoViral ao amin'ny tranonkalanao.
4. Hizara ny URL referral tsy manam-paharoa ao amin'ny Facebook, Twitter ary sehatra sosialy hafa.
5. Teny vava.
6. Mahaiza mamorona! Misy fomba tsy tambo isaina ahafahanao manondro ireo mpampiasa amin'ny GoViral!
Haingam-pandeha no andefasanao ny serivisy?
Ny serivisy rehetra omen'ny tambajotranay dia tanteraky ny vondron'ireo mpampiasa GoViral voasoratra anarana izay mahavita hetsika hahazoana vola madinika. Midika izany fa ny hafainganam-pandehan'ny serivisy tsirairay dia samy hafa arakaraka ny fifamoivoizana azontsika, ary koa ny baiko izay ao amin'ny tambajotranay amin'ny fotoana rehetra. Indraindray dia aterina haingana be izy ireo ary indraindray kosa aterina amin'ny alàlan'ny haingam-pandeha.
Raha tadiavinao halefa haingana kokoa ny baikonao dia tokony Hiditra ary mitsidika ny “Mpikambana”Pejy, ahafahanao manavao ny drafitra Gold na Platinum amin'ny sarany ary mahazo“ Transaction priorité ”.
Ny drafitra Gold sy Platinum dia hametraka ny horonan-tsarinao alohan'ny hafa handray haingana ny serivisinao!
Midira amin'ny tambajotranay maimaim-poana ary manomboka mahazo mpanjifa, hevitra, tiana ary fanehoan-kevitra anio!
Makà fomba fijery YouTube maimaim-poana, mpamandrika YouTube maimaim-poana, fanehoan-kevitra YouTube maimaimpoana ary tian'ny YouTube maimaimpoana amin'ny alàlan'ny tamba-jotra tsotra sy mahomby.
Tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana GoViral
Ny antony rehetra tsy mitombo ny làlan'ny fitsangatsanganana YouTube
Torohevitra 5 hampitomboana ny fifandraisan'ny YouTube
Ny fomba fiasan'ny Algorithm YouTube tamin'ny 2021
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ireo horonantsarinao YouTube
Ahoana ny fomba ahazoana zahana YouTube maimaim-poana amin'ny fantsonao?